မြန်မာ ရိုဟင်ဂျာ စာကြည့်တိုက်: ပြည်ထောင်စုသား အချင်းချင်းလက်တွဲစေလို
ကျနော်တို့ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် ဦးသန်းစိန်အစိုးရ ဟာ တဖြေးဖြေး ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်း ဆီ သို့ ဦးတည် လျှောက်လှမ်း လာနေပြီလို့ ပြောလိုပါတယ်။ ပြည်သူလူထုရဲ့ ဆန္ဒအတိုင်း လိုက်လျောတဲ့ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံးရဲ့ အသက် သွေးကြောဖြစ်တဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ စီမံကိန်းကို တားမြစ်၊ ပိတ်ပင်လိုက်ပြီးတော့ များမကြာမှီ ရက်ပိုင်းအတွင်း ဦးသန်းစိန်အစိုးရဟာ အကျဉ်းသား တချို့ကို လွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပြုဒါကို ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့ မျှော်လင့်ချက်များထဲမှ တခုကို ထပ်မံ ဖြည့်ဆည်း ပေးလိုက်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။
ဒါပေမဲ့ ပြည်ထောင်စုဖွား မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံသား အားလုံး အတူလက်တွဲ အေးချမ်း တည်ငြိမ် စွာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေချင်ကြတဲ့ လူတွေကို လစ်လျူရှု မနေသင့်ပါ။ ကျနော်တို့ဟာ ဘိုးဘေး၊ ဘီဘင် ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရခိုင်ဒေသ တွင်မှီတင်းနေထိုင် လာကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး အိစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မူဆလင်တွေကို တပြည်လုံးအတိုင်း အတာနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ မူဆလင်တွေရဲ့ ဒုက္ခဟာ ဒူးနဲ့ဒေးပါ။ ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မဆလ ဦးနေ၀င်းအစိုးရရဲ့ Dividing Role အမွေဆိုး အမွေခံ ဆက်ခံပေးကြတဲ့ အစွန်းရောက် စစ်ဗိုလ်တချို့တွေရဲ့ မကောင်းဆိုးကျိုးတွေ ကြောင့် ယနေ့ မြန်မာနိုင် ငံ ပြည်ထောင်စုသား အချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲ မလိုမုန်းတီးမှု ပွါးများ လာစေခြင်းကို ဘေးဖယ်ပြီး လိုရာကို မှန်မှန်ကန်ကန် လက်တွေ့ကျကျ လေ့လာ သုံးသပ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဆိုရင် ကျနော်တို့ ပြည်ထောင်စုဖွား ဘယ်နိုင်ငံသားမှ ပြည်ထောင်စုကြိး ကိုပျက်စီးပါစေဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ရှိမယ်မထင်ပါ။ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းနဲ့ အညီ လူသားအခွင့်အရေး တန်းတူရရှိပြီး၊ သာယာဝပြော တဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီးရဲ့ အရိပ် အောက်မှာ ကောင်းစားစေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ ကျနော် တို့ ပြည်ထောင်စု သား အချင်းချင်း လက်တွဲစေလိုတဲ့ဆန္ဒ ကျနော်တို့မှာလဲ ရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက်က သမိုင်းကို လေ့လာ ကြည့်မယ် ဆိုရင်လဲ အထူးသဖြင့် ရှေးပဝေသဏီကပင် ရခိုင်ဒေသရဲ့ သမိုင်းရာဇ၀င်ကို လေ့လာခဲ့တဲ့ သမိုင်းသုတေသီ တယောက်ဖြစ်တဲ့ Forchhammer, E1891(Superintendent Gvernment Printing, Rangoon) A digitized version of the 1970s reprint. စာအုပ် စာမျက်နှာ 39 စာကြောင်းရေ 9,10 မှာရေးထားတဲ့ The Burmese alphabet began to be used in Arakan at the begin of 15th century. ဒါကိုကြည့်ရင် ကျေက်စာအရ ရခိုင်ဒေသတွင် မြန်မာအက္ခရာ ဗျည်းစာလုံးများ 15 ရာစုမှာ စတင်အသုံးပြုလာခဲ့ကြောင်း ရေးသားထားတာကို တွေ့ရတယ်။
ထိုထက်ရှေးကျတဲ့ ကျောက်စာတွေကိုလေ့လာတဲ့ Forchhammer ရဲ့စာအုပ်မှာ စာမျက်နှာ 39 စာပိုဒ်4စာကြောင်းရေ 1,2,3 တွေမှာရေးထားတဲ့ မှုရင်းအတိုင်း- Two and half miles to the east-south-east of the palace is another non-Buddhistic temple. It isaMohamedan mosque , called SANDIKAN built by the followers of King Minzawmwun after he had return from 24 years of the exile in the Suratan (Sultan) country (from A.D. 1406- to 1430).ဒီဟာတွေ Forchhammer ရဲ့စာအုပ်ကို သေချာ တွေးတော ဆင်ခြင် လေ့လာ ဖတ်ရှုရင် ရှေးရှေး ရခိုင်ဒေသမှာ များသောအားဖြင့် မင်းမှုတဲ့သူတွေ Sanskrit ဟိန္ဒူ ဘာသာဝင် အမည်များသာတွေ့ရပြီး ရခိုင် လူမျိုးများနဲ့ စေတီပုထိုး၊ နည်းတူ အိစ္စလာမ်ဘာသာကို ကိုးကွယ်တဲ့ မူဆလင်တွေ နဲ့ ဗလီ ရှိခဲ့ကြောင်း သူရေးထားတဲ့စာအရ သိရှိရပြီး၊ ထိုခေတ်မူဆလင်တွေဟာ (ယနေ့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေ)ဖြစ်ကြပါတယ်။
အလားတူပဲ ရခိုင်ဒေသရဲ့ သမိုင်းရာဇ၀င်ကို လက်တွေ့လေ့လာ မှတ်သားရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့ကြတဲ့ သမိုင်းသုတေသီ ပြည်တွင်း ပြည်ပ P.hd ဒေါက်တာဘွဲ့တွေယူကြခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ မှတ်တမ်း မှတ်ရာတွေဟာ စိတ်ကူးဥာဏ် မဟုတ်ပဲ ရခိုင်ဒေသမှာ ဆက်လက်နေထိုင်မယ့် နောင်လာ နောင်သားများ သိရှိရန်အတွက် သမိုင်း အဖြစ်အပျက် အမှန်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
အဲဒီလို ဒေသတခုမှာ နှစ်ပေါင်းရာချီ ညီနောင်ပမာ မှီတင်းနေထိုင်လာခဲ့ကြတဲ့ ရခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာ တွေကို အစွန်းရောက် ဆိုရှယ်လစ် ၀ါဒီ ဦးနေ၀င်းရဲ့ စိတ်တဇ္ဇဆန်တဲ့ ဘာသာရေး၊လူမှုရေး မုန်းတီးမှု ရောဂါတွေကို ကုထုံးကုနည်းဖြစ်ကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီဆေးပြားနဲ့ ကုသမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ ပြည်ထောင် စုဖွား မြန်မာနိုင်ငံ သား အားလုံး စုပေါင်းညီညာ လက်တွဲနိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူ့ အရေးဟာ တို့အရေး ဆိုသလို ပြည်သူများ အထက်မှ အောက်ခြေ အဆင့်အဆင့် အဟန့် အတား ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ တချို့သော အစွန်းရောက် နိုင်ငံရေးသမားများရဲ့ မသာမာမှု မှားယွင်းတဲ့ အယူအဆ တွေးခေါ်မှု အချက်အလက်တွေကို မိမိအကြိုက် သမိုင်းကိုလိမ်၊ အမှားတွေကို အဟုတ်ထင် ၀ါဒပြန့် လှုံ့ဆော်မှုဖြင့်၊ ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ သံသယ၊ပယောဂတွေ မိမိတို့ရဲ့ ပင်ကိုယ် အရည်အချင်းနဲ့ စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ သိပ္ပံလောက ကွန်ယက်တွေက စောင့်မျှော်နေဆဲပါ။ ဒါတွေကို ဂဃနဏ လေ့လာ မယ့်ဆိုရင် ပြည်သူ့အရေးအနေနဲ့ လူမျိုးတမျိုရဲ့ အတိဒုက္ခ တွေကို ဒီမိုကရေစီ စိတ်ဓါတ်နဲ့ ကိုယ်ချင်းစာနာမယ်ဆိုရင်တော့ ပြည်ထောင်စုသား ညီနောင်များ အချင်းချင်း လက်တွဲကာ ပျော်ပျော်ပါးပါး အတူတကွ ပူးပေါင်း နေထိုင်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ လူမျိုးတမျိုးရဲ့ ဘ၀ရပ်တည်ရေးကို ကိုယ်ချင်းစာနာပြီး၊ သူတို့ရဲ့ အဖြစ်အပျက်အမှန်ကို ကျနော်တို့ ညီနောင်သားတွေဖြစ်ကြတဲ့ ခေတ်ပညာတတ် လူကြီး လူငယ် အားလုံးငြိုငြင်စိတ် မထားပဲ အာတိတ် ရခိုင်ဒေသရဲ့သမိုင်းကို လေ့လာလိုတဲ့ ဆန္ဒဖြစ်စေချင် ပါတယ်။ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းဆီသို့ ပြည်ထောင်စုဖွား မြန်မာနိုင်ငံသား အချင်းချင်း ပူးပေါင်း ညီညာ လက်တွဲစေနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ရင်း………။